Chubb launches three insurance products | Myanmar Business Today
HomeBusinessChubb launches three insurance products
Chubb launches three insurance products
Chubb Life Myanmar has launched three insurance solutions namely Chubb Health Shield, Chubb Accident Shield, and Chubb Critical Illness Shield, which are designed to reduce people’s financial burden in the event of illness, accident or hospitalization.
Chubb Health Shield, with premium payment starting at K33,000 per year, provides financial protection of up to K 10 million in case of hospitalization due to illness, hospitalization due to accidents, and death. Customers can also add on additional coverage for surgery, miscarriage, and clinic visits. It is eligible for ages between6to 75 years.
Chubb Accident Shield starting at K35,000 premium per year provides financial protection of up to K 20 million in case of accidental death, accidental disability, and hospitalization due to accidents. It is eligible for age between 16 to 65 years.
Chubb Critical Illness Shield provides financial protection of up to 10,000,000 MMK for covering medical expenses due to critical illnesses (heart attack, stroke, life-threatening cancer, etc.). The premium payment starts at K 26,400 per year. This is eligible for people between6and 60 years old.
Last year, the government granted insurance licenses to five foreign-owned life insurers, three joint-venture life insurance companies, and three joint-venture general insurance companies. The life insurers awardedalicense include AIA Myanmar Life Insurance, Chubb Life Insurance Myanmar, Dai-ichi Life Insurance Myanmar, Manulife Myanmar Life Insurance, and Prudential Myanmar Life Insurance.
According to 2018 data, the most recent full-year data available, life insurance penetration rate in Myanmar was 0.01 percent and the industry accounted for 0.04 percent of total GDP.
Related Article: Chubb Life Aims for ‘Customers’ Trust’
Chubb Life Myanmar သည် နာမကျန်းဖြစ်မှု၊ မတော်တဆဖြစ်မှုနှင့် ဆေးရုံတက်ကုသရမှုတို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် မြန်မာပြည်သူတို့၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် ပူပင်သောကများကို လျှော့ချနိုင်ရန် အာမခံဝန်ဆောင်မှု (၃) မျိုးဖြစ်သော Chubb ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်၊ Chubb မတော်တဆ ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အကာအကွယ်နှင့် Chubb ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အကာအကွယ် စသည်တို့ကို မိတ်ဆက်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Chubb ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်ကို တစ်နှစ်စာ အာမခံပရီမီယံကြေး ၃၃၀၀၀ ကျပ်မှ စတင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပြီး နာမကျန်းမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်း၊ မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်အနေဖြင့် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အပိုအကာအကွယ်များဖြစ်သော ခွဲစိတ်ကုသရမှု၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုနှင့် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းပြသရမှုစသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထပ်ဆောင်းအနေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအာမခံကို အသက် ၆ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်အထိ ဝယ်ယူထားရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
တစ်နှစ်စာ ပရီမီယံကြေး အနည်းဆုံး ၃၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Chubb မတော်တဆ ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှု အကာအကွယ်သည် မတော်တဆကြောင့် ဆေးရုံတင်ကုသရခြင်း၊ မတော်တဆကြောင့် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် မတော်တဆကြောင့် သေဆုံးခြင်းများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ကို ကျပ်သိန်း (၂၀၀) ထိ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အထိ ဝယ်ယူထားရှိနိုင်ပါသည်။
Chubb ပြင်းထန်သော ရောဂါကုသမှု အကာအကွယ်သည် ပြင်းထန်သောရောဂါများဖြစ်သော နှလုံးရပ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော ကင်ဆာ စသည်တို့ကြောင့် ကုန်ကျသည့် ဆေးကုသစရိတ်များအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရီမီယံကြေးမှာလည်း တစ်နှစ်စာ အနည်းဆုံး ၂၆,၄၀၀ ကျပ် မှ စတင်ရွေးချယ်ပေးသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အသက် ၆ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အထိ ဝယ်ယူထားရှိနိုင်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် အစိုးရက နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံလုပ်ငန်းငါးခု၊ ဖက်စပ်အသက်အာမခံလုပ်ငန်း သုံးခု၊ ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံသုံးခုတို့ ချထားပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ငါးခုမှာ AIA Myanmar Life Insurance, Chubb Life Insurance Myanmar, Dai-ichi Life Insurance Myanmar, Manulife Myanmar Life Insurance, နှင့် Prudential Myanmar Life Insurance တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ သိရှိထားရသောအချက်အလက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုလွှမ်းခြုံနိုင်မှုမှာ သုညဒသမ ၀၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဂျီဒီပီအချိုးမှာလည်း သုညဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။
ဆက်စပ်သတင်း: Chubb Life Aims for ‘Customers’ Trust’
Previous articleEurope sets sights on dud antibody tests amid COVID-19 free-for-all
Next articleKBZ Introduces Credit Assistance Program for SMEs